गुगल वेब डाउनलोड को लागी Free नि: शुल्क एक्सटेन्सन - Semalt समीक्षा
एक्स्टेन्शन एउटा सानो अनुप्रयोग हो जुन तपाईंको वेब ब्राउजरमा थप सुविधाहरू थप गर्दछ। आश्चर्यजनक रूपमा, Google सँग यसको क्रोम वेब स्टोरमा दर्जनौं विस्तारहरू छन् जुन वेब पृष्ठहरू नि: शुल्क डाउनलोड गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईं यी अन्तर्क्रियात्मक विस्तारको साथ गुगल वेब डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। एकचोटि पूर्ण डाउनलोड र सक्रिय भएपछि तपाईले आफ्नो URL क्षेत्रको छेउमा त्यो एक्स्टेन्शनको सानो प्रतिमा देख्नुहुनेछ। के तपाई गुगल वेब डाउनलोड को लागी एक सित्तै र विस्तृत विस्तार चाहानुहुन्छ? यो सुरक्षित छ कि वेबसाइटहरुबाट सामग्री, छविहरु, र भिडियोहरु डाउनलोड गर्न सजिलो छैन र तपाईं साधारण उपकरण र सेवाहरूको साथ कार्य गर्न सक्नुहुन्न। यद्यपि केहि गुगल क्रोम एक्स्टेन्सनले प्रक्रियालाई केहि क्लिकहरूमा सरल बनाउन सक्दछ।
PageArchiver ले तपाईंलाई नि: शुल्क गुगल वेब डाउनलोड गर्न लक्षित गर्न अनुमति दिन्छ र इन्टरनेटमा एक अन्तर्क्रियात्मक विस्तार हो। यसले over० भन्दा बढी भाषाहरू, पूर्ण IME हरू, र २ over भन्दा बढी बिभिन्न लिपिको लागि प्रत्यक्ष ट्रान्सलिटेरेशन, र over० भन्दा बढी भाषाहरूको लागि हस्तलेखन इनपुट प्रदान गर्दछ। तपाईं सजिलैसँग अफलाईन पठनको लागि वेब पृष्ठहरू संग्रह गर्न सक्नुहुन्छ, र पृष्ठआर्चिभरले फाईलहरू HTMLमा निर्यात गर्दछ, तपाईंलाई डाउनलोड वेब पृष्ठहरू सम्पादन गर्न सजिलो बनाउँदछ। तपाइँ यसको WYSIWYG सम्पादकको साथ तपाइँको वेब कागजातहरूमा नोटहरू थप्न सक्नुहुन्छ, ट्याग थप्न सक्नुहुन्छ, अभिलेखहरू रेट गर्न सक्नुहुन्छ, र नि: शुल्क गुगल खोजी परिणामहरू फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ।
२. एकल फाईल
के तपाई नि: शुल्क गुगल वेब पृष्ठहरू डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ? के तपाई गुगल वेब डाउनलोडर खोज्दै हुनुहुन्छ? एकल फाईलले एकल एचटीएमएल फाइलमा वेब पृष्ठहरू अभिलेख राख्दछ र पृष्ठआर्चिभरको विकल्प हो। यो गुगल वेब डाउनलोड को लागी एक उत्तम अनुप्रयोग हो र स्थापना गर्न सजिलो छ। तपाईंले वेब पृष्ठ निर्दिष्ट गर्नुपर्नेछ र पूर्ण डाउनलोड नभएसम्म कुर्नुहोस्। यसका लागि सबै तत्वहरू ठीकसँग लोड गरिएको छ भन्ने निश्चित गर्न डायनामिक कागजात तत्वहरूमा होभर गर्नु राम्रो हो। अर्को चरणमा तपाईले आफ्नो वेब ब्राउजरमा सिंगलफाइल आइकनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ र डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। तपाईं नियमित रूपमा आंशिक वा सम्पूर्ण वेबसाइट प्रक्रियामा गुणस्तरमा सम्झौता नगरी यस अनुप्रयोग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सिंगलफाइल वेबमास्टरहरू र सामग्री क्युरेटरहरूको लागि प्राथमिक विकल्प हो र तिनीहरूलाई गुगल वेब पृष्ठहरू डाउनलोड गर्न सजिलो बनाउँदछ। एकचोटि पूर्ण सक्रिय भएपछि, तपाईं गतिशील साइटहरूलाई लक्षित गर्न आवश्यक ट्याबहरूमा तत्काल पहुँच पाउनुहुनेछ।
Web. वेब स्क्रेपर
के तपाई गुगल वेब डाउनलोडर खोज्दै हुनुहुन्छ? वेब स्क्र्यापर एक अन्तर्क्रियात्मक र शक्तिशाली वेब एक्सटेन्सन हो कि तपाइँको काम पूरा गर्न मद्दत गर्दछ। यो एक इन्टरनेट मा सबै भन्दा राम्रो र सबै भन्दा उपयोगी डाटा निकासी सेवा हो। वेब स्क्र्यापरको साथ, तपाईं सजिलैसँग गुगल वेब डाउनलोड कसरी सम्भव बनाउने भनेर योजना (साइटम्याप) सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ तपाइँको वेबसाइट कसरी ट्र्याभर्स गरिनु पर्छ र के निकालिनु पर्छ भनेर पनि निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। साइटम्यापको साथ, यो उपकरणले तपाइँको वेब पृष्ठहरू तपाइँको आवश्यकता अनुसार सजीलै नेभिगेट गर्दछ र गुणवत्तामा सम्झौता नगरी डाटा निकाल्नेछ। Scraped डाटा JSON र CSV फाईलमा निर्यात गर्न सकिन्छ। यसले बहु डेटा चयन प्रकारहरूलाई समर्थन गर्दछ र किमोनो ल्याबहरू र Import.io को लागी एक राम्रो विकल्प हो।